တစ်ချိန်က ရုပ်ရှင်နှင့် ဗွီဒီယို သရုပ် ဆောင်/အဆိုတော် တင့်တင့်ထွန်း (ခ) ဒေါ်နန္ဒမာလာ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးအတွက် ဆက်သွယ်လိုပါက MyanmarCNN@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပါ။ Myanmar CNN တွင်ကြော်ငြာရန် 09 431 44962 သို့ဆက်ပါ။
Burma daily news, breaking news, what's happening now in Myanmar!
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ဆောင်းပါးများ
သစ်ထူးလွင် သတင်း | Thit Htoo Lwin News
Myanmar ICT News
Kayan Times ABC Radio Australia
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သမီးတော် တစ်ခေတ်တစ်ခါက သရုပ်ဆောင်အနုပညာလောကတွင် အချစ်၊ အကြမ်း၊ အလွမ်းနှင့် စရိုက်မျိုးစုံ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဂီတနယ်ပယ်တွင်လည်း အောင်မြင်သောနေရာတစ်ခု ရယူနိုင်ခဲ့သလို ရုပ်မြင်သံကြား ကြော်ငြာများတွင်လည်း မကြာခဏတွေ့ရလေ့ရှိသည့် အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်တစ်ဦး ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ ရုပ်ရှင်လောကတွင် သရုပ်ဆောင်လုပ်နေစဉ်ကလည်း မင်းသားကျော်သူနှင့်အတူ အတွဲညီစွာ ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းများကို တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသည်။၂ဝဝ၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဦးကျော်သူ အနုပညာလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းခံရပြီး အနုပညာလောကနှင့် ဝေးကွာ သွားပြီးနောက်ပိုင်း မတွေ့ဆုံဖြစ်တော့ပေ။ ယခုတော့ဖြင့် ထိုအနုပညာသည် မောင်နှမနှစ်ဦး တွေ့ဆုံဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့လေပြီ။ သို့သော် ထိုမောင်နှမနှစ်ဦးသည် အနုပညာသည်များ မဟုတ်ကြတော့ပေ။ တစ်ဦးကား ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးအား လက်ကိုင်ကျင့်သုံးကာ အများပြည်သူတို့၏ နာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို အားသွန်ခွန်စိုက် ပေးဆပ်နေသော ပရဟိတ သမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဦးသည်ကား မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပဋိယတ္တိစာပေများကို လေ့လာသင်ယူနေသလို တစ်ဖက်မှလည်း တရားဓမ္မများကို ကြိုးစားအားထုတ်နေသော ဗုဒ္ဓ၏သမီးတော် (သီလရှင်တစ်ပါး) အဖြစ် ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်တော့သည်။ သူမသည်ကား အခြားသူမဟုတ် တစ်ချိန်က ရုပ်ရှင်နှင့် ဗွီဒီယို သရုပ် ဆောင်/အဆိုတော် တင့်တင့်ထွန်း (ခ) ဒေါ်နန္ဒမာလာ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၆.၆.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်ရှိရာ အမှတ် (၁၃/က) ဗိုလ်မှူးဗ ထူးလမ်း၊ ၄၂ ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်သို့ သီလရှင် ဒေါ်နန္ဒမာလာ နှင့်အတူ မိသားစုဝင်များ ရောက်ရှိ လာခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်နန္ဒမာလာသည် ပြည်သူတို့၏ နာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သဘာဝဘေး၊ စစ်ဘေး နှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ကူညီပေးနေသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ လူမှု အကျိုးပြုလုပ်ငန်း များကို ပိုမိုပေးဆပ်နိုင်ရန်အတွက် မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ အလှူငွေ ၃ဝဝဝဝဝဝိ/- (သိန်းသုံးဆယ်) ကျပ် တိတိအား လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ လှူဒါန်းမှုအပြီးတွင် ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူမှ အသင်း၏ လုပ်ဆောင် ချက်များအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လိုက်လံရှင်းပြပြီး သီလရှင် ဒေါ်နန္ဒမာလာမှ လှူဒါန်းမှုအစုစုတို့အား ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) Facebook နှင့် Website စာမျက်နှာတို့တွင် အများပြည်သူ မုဒိတာပွားနိုင်ရန် သတင်းတင်လိုပါသည် ဟုခွင့်တောင်းခဲ့ရာ ဒေါ်နန္ဒမာလာမှ “သီလရှင်အနေနဲ့ အခုလို သတင်းတင်တာ ကြွားဝါသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ မတင်စေချင်ဘူး၊ မသင့်တော်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အများသူငါ မုဒိ တာပွားနိုင်အောင် တင်ချင်တယ်ဆိုတော့ မတားတော့ပါဘူး၊ သီလရှင်အနေနဲ့ လှူချင်နေတာကြာပြီ ဒါပေမယ့် အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တော့ မလှူဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ ဒီကနေ့တော့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ လှူဖြစ်ခဲ့ တယ်၊ သီလရှင်က တစ်ပါးတည်း မိဘတွေကလည်း မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ဟိုးတုန်းက တွေးမိဖူးတယ်၊ ငါသေရင် ဘယ်သူကများ အသုဘချပေးမလဲလို့ တွေးပူခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တော့ ကိုမောင် (ကိုကျော်သူ)တို့ နာရေးအသင်းရှိနေတာပဲ ဘာပူစရာရှိလဲလို့တွေးမိပြီး ဒီအသင်းကြီးက အများပြည်သူကို ကူညီပေးနေတာဆိုတော့ ဒီအသင်းကြီး ရေရှည်တည်တံ့ဖို့အတွက် သီလရှင်အနေနဲ့ လှူဖို့လို မယ်ဆိုတာ ကို တွေးမိတဲ့အတွက် အခုလိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ လာလှူဖြစ်ခဲ့တာပါ” ဟု မိန့်ကြားခဲ့သည်။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း သီလရှင် ပဋိယတ္တိစာပေများ သင်ဆည်းပူးနေခြင်းအား မေးမြန်းကြည့်ရာ “ပညာရေးအနေနဲ့ ပထမငယ်ဖြေထားပါတယ်၊ သီလရှင်ဝတ်တာ တစ်ဝါရပြီးပါပြီ” ဟု ပကတိ တည်ငြိမ် အေးချမ်းစွာဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ကားများထဲတွင် ထိုကဲ့သို့သော သီလရှင်ဝတ်သည့် ဇာတ်ဝင်ခန်းများကို ကြည့်ခဲ့ကြဖူးသော်လည်း ဒေါ်တင့်တင့်ထွန်းအား မြတ်ဗုဒ္ဒ၏ သမီးတော် ဒေါ်နန္ဒမာလာအဖြစ် မြင်တွေ့ရသည်ကား များစွာကွာခြားလှပါသည်။ စကားပြောခြင်း၊ လမ်း လျှောက်ခြင်းမှစ၍ အရာရာအား သတိကပ်ကာ ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ ကျင့်ကြံနေထိုင်သွားနိုင်ပြီကို သတိထား မိပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ယခင်အချိန်က အနုပညာလောကတွင် ပြည်သူတို့အား ပျော်ရွှင်စေရန် အနု ပညာဖြင့် ဖျော်ဖြေပေးခဲ့သော ဒေါ်တင့်တင့်ထွန်းသည် ယခုအခါ ဒေါ်နန္ဒမာလာအဖြစ် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သမီး တော်ဘဝနှင့် ပဋိပတ္တိစာပေများ လေ့လာလိုက်စားကာ တရားဘာဝနာများ စီးဖြန်းအားထုတ်နေသလို တစ်ဖက်မှလည်း နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် အများပြည်သူအတွက် ကူညီပေးဆပ်နိုင်ရန် ဝတ္ထု ငွေကြေးများဖြင့် လှူဒါန်းခဲ့သော အလှူဒါနအား မိဘနှစ်ပါးနှင့်တကွ သံသရာတွင် ကျင်လည်ကြကုန်သာ (၃၁) ဘုံသား ဝေနေယျ သုခိတာ၊ ဒုက္ခိတာအပေါင်းတို့အား အမျှ .. အမျှ .. အမျှ ပေးဝေငှပါ၏။ အားလုံးသော (၃၁) ဘုံသားအပေါင်းတို့ သာဓု .. သာဓု .. သာဓု ခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေသား။ (၃၁) ဘုံသား ဝေနေယျသတ္တဝါများ အားလုံးအေးချမ်းသာယာ ရှိနိုင်ကြပါစေ။ သတင်းဓါတ်ပုံ- နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)
ယခုကဲ့သို့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများကို အောက်မှ Follow ကိုနှိပ်ထားရုံဖြင့် (သတိပြုရန် - Follow ပေါ်တွင် အမှန်ခြစ်ရှိနေပါက မနှိပ်ရပါ။) facebook သုံးရင်း သတင်းများကို ဖတ်နိုင်ပါမည်။
၈ရက်၊ ၃လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်
တပ်မတော် အရာရှိ ၆၀ ကို ရဲအရာရှိ အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ ခန့်ထား
လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းအတွင်း ဘုရားသားတော်တစ်ပါး၏ စွမ်းဆောင်ချက် (7Day News Hero)
အုံတုံပင်ကျေးရွာ ပဋိပက္ခတွင် ရရှိခဲ့သော ဒဏ်ရာများကြောင့် ဆရာတော် ဦးဇနက အား မုံရွာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် ကုသနေရ
၇ရက်၊ ၃လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်
အလိုမတူဘဲ အဓမ္မပြုကျင့်သူကို အရေးယူ
iPhone 5S အတွင်းမှာ ဘာထူးခြားပြောင်းလဲသွားခဲ့မှု
ရာနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ မလေးမှာ ချုပ်နှောင်ခံရ
စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်မှာ ရဲနဲ့ ဒေသခံတောင်သူတွေ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေ (video သတင်း)
မိမိကိုယ်ကိုယ် ထောက်လှမ်းရေးကဟုပြောသူ၏ ပြိုင်ကား မန္တလေးမှာ အရှိန်လွန်တိမ်းမှောက် (video သတင်း)
ကျုံးဘေး ညအချိန်တွင် နိုင်ငံခြားသူကို စကားပြောဟန်ဆောင်ကာ ကျောပိုးအိတ်လု
ခေါင်းပြတ်လဲ တစ်ပတ် အသက်ရှင်တဲ့ ပိုးဟက်
ဟစ်တိုင် ဂျာနယ်က ဦးမိုးသီးဇွန်ကို တောင်းပန်
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် (Vampires) တွေ တစ်ကယ်ပဲ ရှိသလား
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ရုပ်ရှင်ကား အညာသား ၄ဦး မဏာမရွေးချယ်ပြီး
ချစ်သူနှစ်ဦးကြား မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာလေးတွေ
ခင်ပွန်းရဲ့ အအေးခံထားတဲ့ သုက်ပိုးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခွင့်ဥပဒေကြောင်းအရ အနိုင်ရ
ကလေးတွေကို လုံခြုံစိတ်ချရစေမဲ့ GPS နာရီ
ပြည်ပက မြန်မာ သံရုံးတွေရဲ့ ထက်ဝက်ပဲ မြန်မာပိုင်ဆိုင်
အမှောင်ထဲမှာ မပျော်ပါနဲ့၊ အလင်းကို ရှာပါ
ဆယ်တန်းကျောင်းသား ၃၂ ဦး ဘဲဥစားပြီး အစာအဆိပ်သင့်မှုမှာ လက်မဆေးဘဲ ချက်ကျွေးသူ ကြောင့်ဟုဆို
ယောကျာ်းတစ်ယောက်က သင်နဲ့ပတ်သက်ချင်လွန်းလို့ဆိုပြီး ခယလာအောင်လုပ်နည်း (မိန်းကလေးများအတွက်သာ)
ကျပ်သိန်း ၁၅ဝဝ ထီပေါက်သူကို ကျပ် ၂ သိန်းခွဲပဲ မှားလျော်မိတဲ့အဖြစ်
အရောင်းဝန်ထမ်းကို သိန်း ၁၉၀၀ ကျော်ကို ကိုယ်ကျိုးသုံးဟု အမှုဖွင့်တိုင်
၆ရက်၊ ၃လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်
စစ်ဖြစ်ခဲ့ပါက တိုက်ပွဲ ဝင်နိုင်ရန် ယူကရိန်း လူငယ်ပေါင်း များစွာ တပ်သားသစ် အဖြစ် ဝင်ရောက်
ဦးသန်းရွှေပုံဖြင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဦးဝင်းတင်တုံ့ပြန်
ဘီလီလျံနာ Sir James Dyson တီထွင်လိုက်တဲ့ အသံတိတ် ဒလက်မဲ့ ပန်ကာ
ကျွန်မမိသားစုက ကျွန်မကိုကလေးတစ်ယောက်လိုခံစားမိစေခဲ့ပါတယ် လို့ပြောလိုက်တဲ့ Angelina Jolie
မိုးကုတ်ရွှေဆိုင် ဓားပြတိုက်မှု ကျူးလွန်သူလေးဦးကို ဖမ်းဆီးရမိပြီး ဓားပြတိုက်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် လက်နက်နှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကထားစစ်ဆေး
ယနေ့ နံနက် ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်း တွင် ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွား၊ယာဉ်နောက်လိုက်သေဆုံး
မကောင်းဆိုးဝါးတွေ အကြောင်းပြောပြီး ကလေးတွေပါတဲ့ ကားကို သမုဒ္ဒရာထဲ ထိုးမောင်းခဲ့တဲ့ မိခင်
ကားပေါ်က ကြဲချတဲ့ ပိုက်ဆံလိုက်ကောက်တဲ့ ၇ တန်းကျောင်းသား ကားတိုက်ခံရ
၅ရက်၊ ၃လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်
လူထွားကြီးတစ်ဦးကြောင့် ပူတာအိုမြို့မှ အမျိုးသမီးများ ထိတ်လန့်လျှက်ရှိ
မုန့်ဖိုးနှင့်အတူ ကိုယ်ချင်းစာတရားမှလွဲ၍ အခြားအရာများ မပါစေရ
ဆေးခန်းသွားပြသောမိခင်နှင့်ဖခင် ပြန်အလာကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ် နေအိမ်ဝရံတာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပြုတ်ကျ သေဆုံး
စင်္ကာပူတွင် မြန်မာအိမ်ဖေါ်တစ်ဦး လူသတ်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရ
ငါးသောင်းပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ထီ တိုက်ကြည့်မှ သိန်းထောင့်ငါးရာပေါက်မှန်းသိ
အော်ရီဒူးက ဖုန်းဆင်းကတ်များ လျှောက်လွှာစနစ်ဖြင့် ကြိုတင်ရောင်းချ
ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များကို ပြန်လက်ခံရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝန်ကြီးချုပ်တောင်းဆိုမှု မြန်မာသမ္မတပယ်ချ
အဝလွန်ပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့သည့် ဦးဝင်းရွှေ ဆေးကုသရန် အကူအညီလိုအပ်နေ
၄ရက်၊ ၃လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ထီးတော် အသစ်တင်ရန် လျှောက်ထားမှု ဆရာတော်အချို့ကန့်ကွက်ထား
ဗုံးသီးဟောင်းအား တုတ်ဖြင့်ရိုက်ကစားရာက ပေါက်ကွဲ၍ သေဆုံး
အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အကြောင်း ရုပ်ရှင် ကမ္ဘာကျော် ဒါရိုက်တာ စတီဗင် ဆိုဒါပတ်နှင့် ဇာဂနာ ပူးတွဲ ရိုက်ကူးရန် စီစဉ်
မုံရွာမြို့နယ်တွင် ဆိုင်ကယ်စီးလာသူ လူတစ်ဦး ဓားဖြင့် ၂၁ ချက်ခုတ်ခံရသဖြင့် သေဆုံး (ဓာတ်ပုံအစစ်ပါသည်၊ ကြောက်လန့်တတ်သူများ မကြည့်ပါနှင့်)
မင်္ဂလာအခမ်းအနား ပြုလုပ်ခဲ့သော လိင်တူချစ်သူနှစ်ဦးကို ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲစခန်းက စုံစမ်းစစ်ဆေးနေ ဟု ဆို
ဘင်လာဒင်၏ နေအိမ်သို့ လည်ပတ်သူ တစ်သန်းခန့်ရှိ
လမ်းဖြတ်ကူးသူအားတိုက်မိပြီး မောင်းပြေးသည့်ယာဉ်အား လိုက်လံဖမ်းဆီး
ထိုင်းမင်းသမီး၏ အိမ်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်၍ အဓမ္မကျင့်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ဘဲ အဖမ်းခံရ
ဘောလုံးကွင်းထဲက ရယ်စရာ အလွဲများ
လန်းဆန်းဖို့ ကော်ဖီသောက်ရင် နံနက်ပိုင်း မှတ်ဥာဏ်တွေ ထိခိုက်နိုင်စေပါသလား
အသက် ၁၀၇ နှစ်ရောက်မှ ယောင်္ကျားလိုချင်၍ သက်ဆိုင်ရာကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အဘွားအို
၃ရက်၊ ၃လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းသူကိုယ်စား ၀န်ချတောင်းပန် လျှောက်ထားလွှာအား အင်းစိန်ရွာမ ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆက်ကပ်၊ အမျိုးဘာသာသာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေများ ပြဌာန်းရန် ဆောင်ရွက်ချိန်တွင် မနှောက်ယှက်ရန် ဆရာတော်ကြီးက သတိပေး
နဝမတန်းကျောင်းသူတစ်ဦး လပတ်စာမေးပွဲအမှတ် နည်း၍ ပိုးသတ်ဆေးသောက် သေကြောင်းကြံ
အမြန်လမ်းမကြီးတွင် Express ယာဉ်ကို ခဲဖြင့်ပစ်ပေါက်သူအားဖမ်းဆီးရမိ.
လူတစ်ဖက်သားကို အရမ်းတွေးပေးတတ်တဲ့သူမို့ သူ့ကို သဘောကျ ချစ်မိသွားတာလို့ ဖွင့်ဟခဲ့တဲ့ သက်မွန်မြင့်
သဲသောင်ပြင်ပေါ်ရှိ လိပ်ဥများ (သို့) မေတ္တာဓာတ် အားကြီးသော အမျိုးသမီးများအကြောင်း
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော အမျိုးသားအချင်းချင်း ထိမ်းမြားမင်္ဂလာလက်ထက်ပွဲ (ဓာတ်ပုံများ)
ဒေါ်တင်ဝင်း - သောင်းဂဏန်း ပမာဏ မကိုင်ရတာကြာပါပြီ
၂ရက်၊ ၃လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးမောင်ဝိတ် ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခု တည်ထောင်မည်ဟုဆို
မန္တလေးခရိုင် မြို့နယ် နှစ်ခုတွင် စစ်သုံးကျည်ကာ ပုံစံဝတ်စုံများနှင့် တိုက်ခိုက်ရေး ပစ္စည်းများတွေ့
မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသမှ ရန်ကုန်မြို့အထိ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အညွှန်းကိန်းများမြင့်တက်လာ၊ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များရှိနိုင်သောကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို သတိပြုရန်လိုအပ်
၁ရက်၊ ၃လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်
ပိုင်ရှင်မဲ့ မောင်းပြန်သေနတ်တွေ သိမ်းမိတာ စိတ်ဝင်စားစရာ
ဟောင်ကောင်အလုပ်ချိန်သတ်မှတ်မှု မြန်မာအိမ်အကူများ အဆင်မပြေ
မြန်မာပြည်က အစားအသောက် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု မရှိဆုံး နိုင်ငံ
ငိုလို့ ရယ်လို့ မရတဲ့ သမိုင်းထဲက မျက်နှာနှစ်ဘက်နှင့် လူသား
ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ကြည့်ကောင်းနေစေဖို့အတွက် ကျင့်သုံးရမယ့် အချက် (၁၁) ချက်
ရခိုင်ရိုးမမှာ ဒိုင်နိုဆောလို့ ယူဆရတဲ့ ရုပ်ကြွင်း တွေ့
အမဲသားပြုပ်ကြော် မွှေးမွှေးလေး (ဟင်းချက်နည်း)
မိန်းကလေး တစ်ဦးပာာ ယောက်ျားလေး နောက်ထပ် တစ်ယောက် ရှာရတဲ့ အကြောင်းပြချက် များ
၂၈ရက်၊ ၂လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်
အချစ်ကို စိတ်နာပြီး ကိုယ့် ငယ်ပါကိုဖြတ်ခဲ့တဲ့ လူငယ် ၂ ဦး
စနိုက်ပါ ကျည်ဆန် သယ်ဆောင်လာသော ပြင်သစ်နိုင်ငံသားကို ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဖမ်းမိ
သားရဲ့ ပါးစပ်ကို သော့ခလောက်နဲ့ ပိတ်ပြီး သေတဲ့အထိ ရိုက်သတ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားလူမျိုး ဖခင်
အိမ်ထောင်ကျသွားပေမဲ့ အခုထိ နေသားမကျသေးဘူးလို့ဆိုတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
Designed by Myanmar CNN
သင့် email ရိုက်ထည့်ပြီး submit နှိပ်ပါ။ ဆက်လုပ်ရန် မသိပါက၊ လုပ်ဆောင်ပုံ အသေးစိတ်ကို Subscribe blog posts by email တွင် သွားရောက် ဖတ်ရှုပါ။
တစ်ချိန်က ရုပ်ရှင်နှင့် ဗွီဒီယို သရုပ် ဆောင်/အဆိုေ...
မလေးရှား ဆာလာယန်းက သတိပေးသံ
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရသော မြန်...
မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားသော အကြမ်းဖက်မှု ပိုဆိုး...
ညမအိပ်စက်မိ လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်များသုံးသူမျ...
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ နောက်ထပ်မြန်မာ ၃ ဦး သတ်ဖြတ်ခံရ
မလေးရှား သတင်းထူး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ယင်းမာပင်မြို့နယ် လယ်မြေပေါ်မှာ အင်အားသုံး ဖယ်ရှားလုို့ ဒေသခံနှင့် ရဲတပ်ရင်း ပဋိပက္ခဖြစ် (ရုပ်သံ)
ဦးလေး ပြောခဲ့သော ရှောင်ရန် အချက် ၉ ချက် ၊ ပါ (၃) ပါ ၊ ချာ ( ၃ ) ချာ ၊ ကွာ ( ၃ ) ကွာ ။
လူကြည့်အများဆုံး (အစမှ ယခုထိ)
သစ်ထူးလွင် သတင်း ဆိုရင် ဒီမှာဖတ်ပါ - Thit Htoo Lwin News နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဟိုတယ်အခန်းအတွင်း တည်းခိုနေထိုင်ခဲ့သည့် ဆီဒိုးနား လျှို့ဝှက် ကင်မရာ ရိုက်ကူးထားသည် ဗီဒီယိုဖိုင်များ ပြန့်နှံ့နေ
Myanmar CNN Google+ | Myanmar News Now | Thit Htoo Lwin News - သစ်ထူးလွင် သတင်း .com
Website | Mandalay Hotel | Singapore SEO